IPodcast 9 × 08: I-iPhone X ilapha | Ndisuka mac
Sikwiveki ephambili kubathandi beApple kunye ne-iPhone ngokukodwa. Izolo ebusuku kwi # podcastApple sithethe ngokusungulwa kwe entsha kunye nexesha ekudala lilindelwe i-iPhone XUkuba ezaseCupertino ziya kuba nesitokhwe semodeli entsha yabo bonke abafuna ukuyithenga kunye neminye imiba enxulumene noko.
Ngokuqinisekileyo i-podcast yangokuhlwa iphethwe yi-iPhone yesi-XNUMX. Ukongeza kwi-iPhone X entsha kunye nokukhululwa kwayo kwintengiso, siphendula ezinye zeefayile ze- imibuzo ebuzwe ngabasebenzisi bencoko yethu yeTelegram kwiBluetooth, ubukhulu beflegi entsha yeApple kunye neenkcukacha ezithe kratya.
Akuthandabuzeki akunakwenzeka ukuba ungathethi malunga ne-iPhone X entsha xa kushiyeke phantse kube ngaphantsi kosuku ukuze baqalise ukubhukisha. Kwelinye icala, kufuneka kuphindwe ukuba kukho imithombo eliqela ephikisana neengxaki kwimveliso kunye nokusilela kwetheminali kwizigidi zabasebenzisi abaza kuphehlelela iiyure zokuqala zokuthenga, ke ukuba ungomnye wabo bafuna ukuthenga I-iPhone X kwaye unayo nge-3 kaNovemba ukusuka apha sininqwenelela lonke ithamsanqa emhlabeni.
Unokwabelana ngemibuzo yakho, amathandabuzo okanye iingcebiso kwinethiwekhi yoluntu iTwitter usebenzisa i-hashtag #podcastapple okanye ushiye uluvo lwakho kweli nqaku. Ngayiphi na imeko, kuyonwabisa ukwabelana ngezi ntetho malunga nehlabathi le-Apple nayo yonke into elijikelezileyo. Asifuni ukudubula singakhange sikhumbule kuqala ukuba ukuba ufuna ukulandela zonke iziqendu zeli xesha lesithoba, kufuneka Rhuma kwisitishi sethu seTunes. Kodwa ukuba, ngokuchaseneyo, ukhetha iYouTube kune ukonwabele ipodcast nganye, kufuneka ume nje umjelo wethu kwaye ubhalise, ukuze ngalo lonke ixesha ividiyo yakutshanje ifumaneke, uya kufumana isaziso ngeakhawunti yakho ye-imeyile okanye ngesicelo seYouTube.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IPodcast 9 × 08: I-iPhone X ilapha
I-AI iya kuvelisa ukuya kuthi ga kwi-13.000 yezigidi ngo-2025, ngokwekhansile yetekhnoloji ethathe inxaxheba yi-Apple